'योग नगर' बन्दै टीकापुर, योगाश्रमको नवनिर्मित भवन उद्घाटन - Morning Bell
अंकुश कुँवर	टीकापुर	माघ ८, २०७७
कैलाली जिल्लाको पूरानो नगरपालिकामध्ये टीकापुर नगरपालिका योग नगरका रुपमा विकास भइरहेको छ । देशमै धेरै योग सम्बन्धी गतिविधि हुने टीकापुर नगरपालिकामा यसको विकासका लागि थप प्रयासहरु भएका छन् ।
२०५४ सालमा विधिवत रुपमा स्थापना भएको टीकापुर योगाश्रमको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ । २ करोड ७ सय ७२ रुपैयाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनको योगाश्रमको २३ औं वार्षिकात्सवको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. रावलले टीकापुरमा देशकै नमुना योगाश्रम बनेको र यसले अब अनुसन्धान केन्द्रको रुप लिने बताए । उनले यहाँ योग सिकाने मात्रै नभई योग अनुसन्धान र प्राकृतिक चिकित्साको सेवा पनि दिने बताए । ‘यहाँ अब योग सिकाने काम मात्रै हुँदैन, उनले भने, ‘योगाश्रम अन्तर्गत अब अनुसन्धानको कामसंगै प्राकृतिक चिकित्सा सेवा पनि उपलब्ध गराउने चरणमा पुगेका छौं । यहाँ नेपाली मात्रै नभई भारतीय नागरिक पनि आउनसक्छन् ।’
योग शिक्षाको तीब्र विकास भइरहेको टीकापुर आफैमा योग नगरका रुपमा विकास भइसकेको डा. रावलको भनाई छ । योगाश्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र प्रस्ताव गरिको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न आफू सदैव तत्पर रहेको उनले बताए । आफू विगतदेखिनै योग गरिरहेको र स्वस्थ रहनका लागि सबैले सदैव योग अभ्यास गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसतर्फ लाग्न उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै आश्रमका संस्थापक एवं प्रमुख योग गुरु पृथ्वीराज रावलले अब योगलाई व्यवसायिक रुपमा स्थापित गरिने बताए । अहिले योग शिक्षा निर्विकल्प आवश्यकताका रुपमा देखिएकाले यसलाई योग अभ्यासका रुपमा मात्रै सीमित नराखेर कसरी व्यवसायिक रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए । सोही सोचका साथ टीकापुर योगाश्रमले अनुसन्धान केन्द्र र प्राकृतिक चिकित्सा सेवा विस्तार गर्न लागिरहेको बताए ।
अनौपचारिक रुपमा टीकापुरमा २०४५ सालदेखि योग गर्न सुरु भएको भन्दै योग गुरु रावलले टीकापुर योग शिक्षामा देशमै अगाडि रहेको बताए । उनले टीकापुर अब योग नगरीका रुपमा विकास भइसकेको बताए । ‘३२ वर्षअघि मैलेनै यहाँ योग सिकाउन सुरु गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘विभिन्न उतारचढावकाबीच १० वर्षपछि २०५४ मा विधिवत रुपमा संस्था दर्ता गरेर टीकापुर योगआश्रम सञ्चालन गरेका हौं ।’
टीकापुरलाई योगका माध्यमबाट अब स्वास्थ्य पर्यटनको रुपमा पनि चिनाउनुपर्ने योग गुरु रावलको भनाई छ । सुदूरपश्चिमको यो क्षेत्र आफैमा मानस क्षेत्र भएकाले यहाँबाट पाप पखाल्नका लागि बाहिर जानै नपर्नेसमेत उनले बताए । योगलाई आत्मसाथ गरे जुनसुकै रोगबाट पनि बच्न सकिने र लागेको रोगहरुलाई पनि बिना असर सहजै रुपमा निको पार्न पनि सकिने भएकाले सबैले योग गर्नुपने उनको सुझाव छ ।
देशका अन्य ठाउँ भन्दा टीकापुरमा योग शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि बढी हुनेगरेका छन् । योग शिक्षाप्रति यहाँका मानिसहरुको आकर्षण पनि रहेको र त्यो बढ्दैपनि गइरहेको योग गुरुहरु बताउँछन् । प्याब्सन कैलालीका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले योगकै माध्यमबाट रोग लाग्न नदिने मात्रै नभई भएका रोगहरुलाई पनि निर्मुल पार्न सकिने बताए । उनले आफूलाई भएको कब्जियत र युरिकयसिड पनि योग अभ्यासकै माध्मबाट निको बनाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । योग गरेर स्वस्थ रहन उनले सबैलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।
महायज्ञमा दाताबाट ९३ लाख ९० हजार ७७२ रुपैया, टीकापुर नगरपालिकाबाट १४ लाख ५० हजार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट ७० लाख र सांसद विकास कोषबाट २२ लाख गरेर दुई करोड ४० लाख रुपैयाँमा नवनिर्मित भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
योगाश्रम उद्घाटनका अवसरमा योग गुरु रावललाई सम्मानसमेत गरिको थियो । उनलाई काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रावलले योग गुरु रावललाई फूलमालासहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
८ माघ २०७७, बिहीवार २०:३९ बजे प्रकाशित